IMcCain Foods Rus yethule iphrojekthi yokwakha indawo yokulungisa amazambane e-Uzlovaya SEZ - Potato System Magazine
IMcCain Foods Rus yethule iphrojekthi yokwakha indawo yokulungisa amazambane e-Uzlovaya SEZ
в izindaba, Ukuphinda usebenzise kabusha
Izigaba zalokhu kuqaliswa kokusebenza kukhulunywe ngazo emhlanganweni nguNgqongqoshe Wezokuthuthukiswa Komnotho weSifunda saseTula uPavel Tatarenko kanye noMqondisi Jikelele weMcCain Foods Rus LLC Alexander Petrov.
Njengesikhumbuzo, uMbusi u-Alexei Dyumin no-Alexander Petrov basayine isivumelwano ngokwakhiwa kwesakhiwo sokucubungula amazambane endaweni ekhethekile yezomnotho (SEZ) Uzlovaya ngoDisemba 29, 2020.
U-Alexander Petrov uthe ukwakhiwa kwalesi sitshalo kuhlelwe ukuqala ngoMeyi walo nyaka futhi kuphothulwe ngasekupheleni kuka-2022. Ukukhishwa kwemikhiqizo eqediwe kuhlelelwe ukuphela kuka-2022 - ekuqaleni kuka-2023. Ibhizinisi elisha lizocubungula ngaphezu kwamathani ayizinkulungwane ezingama-200 amazambane futhi likhiqize ngaphezu kwamathani ayizinkulungwane eziyikhulu emikhiqizo eqediwe ngonyaka.
UPavel Tatarenko uqaphele ukuthi ukwakhiwa kwesitshalo esinjalo kungumsebenzi obaluleke kakhulu wokuthuthukisa isifunda. Umkhiqizo omusha awuhlosile kuphela ngokufaka esikhundleni semikhiqizo engenisiwe manje enikezwa ivela eYurophu, kodwa futhi nasekuthuthukiseni ukuthunyelwa kwemikhiqizo yezolimo esifundeni saseTula.
UMcCain waba yisakhamuzi sokuqala sakwamanye amazwe sendawo ekhethekile yezomnotho e-Uzlovaya.
Source: Uhulumeni wesifunda saseTula
Tags: UMcCain Foods RusUmkhiqizo wama-fries waseFranceIsifunda saseTula
"Iphiramidi yezakhi zofuzo" inikeza amazambane ukumelana nokulimaza sekwephuzile
Amathrendi amakhulu emakethe yezabasebenzi emkhakheni wezolimo. Umbono wesazi wenkampani "Agasti"